Lounge toerana ipetrahana
Foshan SitZone Furniture Co., Ltd. naorina tamin'ny taona 2009, dia misahana manokana ny mpanamboatra fanaka birao seza sy ny Sofas.
Ny orinasa dia miorim-paka ao Shina fanaka sy manan-danja ara-nofo tanàna --- Longjiang, Shunde, By mampiasa akora eo an-toerana na olona, ​​tombony, ny orinasa dia mifantoka amin'ny seza ny anjara fanompoana izay efa tena tanteraka ao. Ny hatsaran-toetra ny matihanina toe-tsaina miezaka ho tonga lafatra sy ny tsara fanompoana lehibe indrindra mpanjifa-toe-tsaina, dia efa miorina tsara laza ao amin 'ny fahazotoana miasa, ary manana tombontsoa hita mifaninana amin'ny vokatra Price tahan'ny zava-bitany.
Koa satria ny orinasa naorina, Sitzone maniry haingana na ny any amin'ny lafiny famokarana fahaiza-manao na talenta. Eo ambany ny faritry ny hentitra mifehy ny toetra. Tsy manome ny mpanjifa miaraka amin'ny lavorary rehefa fivarotana fanompoana. Mandritra izany fotoana izany, dia mbola hanana ny famolavolana an-tsaha, mba hitondra vaovao famoronana sy ny heriny ho an'ny vokatra.
SitZone Furniture dia hanohy hanaraka ny fitantanana ny fitandremana ny foto-kevitra hanorina aloha, fanompoana marina, mba fanompoana ny mpanjifa ny tsirairay sy ny fiaraha-miasa partner.We handray ny namana avy any an-trano sy manerana izao tontolo izao mba hitsidika sy iaraho midinika miaraka us.We manantena amin'ny fanorenana fiaraha-mientana ifampizarana mandritra ny fotoana maharitra mahasoa sy tso-po sy faly ny fiaraha-miasa aminareo!